China isitya esinye nepaneli 7540 mveliso kunye nabenzi | Jiawang
Ukwenza isidlo sakusasa esimibalabala, isidlo sasemini esilungiselelwe kakuhle okanye isidlo sothando sedwa, uhlala ujikeleze nosapho kunye nabahlobo kwaye uncokole nabo, ubomi benziwa yimiba enjalo, eyenza abantu bayonwabele. Kwindawo efudumeleyo yasekhitshini, isixhobo esisebenzayo nesinobuthi kufuneka sibe yinto engabalulekanga. Kwakha imeko-bume yasekhitshini eethe-ethe, emnandi ngokwenene .Ukushiya isitayile esinomgangatho ophezulu yinto emnandi yentliziyo yethu, isimo esihlaziyiweyo nesinomtsalane ngobomi.
Isixhobo: SUS 201/304
Isitya esinye kunye nephaneli
Mount: Isinki ephezulu
I-Angle: I-engile ejikelezileyo
Ubungakanani: 750 * 400mm
Ubunzulu: 140 ~ 190mm
Ubungqingqwa: Ukusuka kwi-0.4 ukuya kwi-0.8mm
Gqibezela: iPoland / iSatin / i-Electroplate
Ukuvula isitshisi: 75/110 / 140mm
Edge: I-Layon / Faka
Anti-bako kunye anti-umhlwa
Ngamava angaphezu kweminyaka eli-10, sixhotyiswe kakuhle neqela labaqulunqi abaqeqeshiweyo nabanamava, iinjineli kunye nabasebenzi.Sinikezela ngomgca obanzi wesinki ekhitshini kwimiyilo eyahlukeneyo kunye nobukhulu ukuhlangabezana neemfuno zomthengi ngamnye.Imveliso zethu zithunyelwa ngaphandle ukuya e-Afrika, e-Eshiya, eMbindi-Mpuma naseMazantsi eMelika.Umgangatho ophezulu wezinto kunye nobungcali bobugcisa zinikezelwa kwinkqubo, ekuqinisekiseni umgangatho weemveliso zokugqibela.Ngokongeza, ngaphezu kweemodeli ezintsha ezingama-20 ziphuhliswa minyaka le. Izitshini zasekhitshini, kodwa nezimvo zabathengi bethu.Ubudlelwane bexesha elide kunye nokuphumelela kwezorhwebo kulandelwa kakhulu kwinkampani yethu.
Ixesha lokukhokela: Kwiisampulu, ixesha elikhokelayo limalunga neentsuku ezisi-7. Kwimveliso yobuninzi, ixesha elikhokelayo ziintsuku ezingama-20-30 emva kokufumana intlawulo yedipozithi. Amaxesha akhokelayo ayasebenza xa sifumene idipozithi yakho, kwaye kwangaxeshanye sinemvume yakho yokugqibela yeemveliso zakho.
Indlela yokuhlawula: T / T, i-30% idiphozithi kwangaphambili, i-70% eseleyo ngokuchasene nekopi ye-B / L.
Ukuhlolwa komgangatho ongqongqo ngaphambi kokuziswa.
Iindlela ezininzi zokupakisha ukhetho lwakho.
Edlulileyo: I-Bowl eyodwa i-LS7643
Okulandelayo: Ukucofa isitya esinye ngePannel 9643
I-Bowl enye ngaphandle kwePaneli GE6145
Izitya ezenziwe kabini ezenziwe ngezandla HM10048D
Izitya ezibini ngaphandle kwePaneli RDE8243
Isitya esinye DD15050C